US urges 'all Zimbabwean leaders' to show restraint - The Zimbabwe Mail
HomeZimbabweUS urges ‘all Zimbabwean leaders’ to show restraint
US urges ‘all Zimbabwean leaders’ to show restraint
A Zimbabwean army armoured personnel carrier is parked at an intersection on November 15, 2017 in Harare, Zimbabwe
The United States expressed concern on Wednesday over the political crisis in Zimbabwe, where the military has apparently placed President Robert Mugabe under house arrest.
“The US government is concerned by recent actions undertaken by Zimbabwe’s military forces,” the official said.
“We call on all Zimbabwean leaders to exercise restraint, respect the rule of law, uphold the constitutionally-protected rights of all citizens, and to quickly resolve differences to allow for a rapid return to normalcy,” he added.
“The United States does not take sides in matters of internal Zimbabwean politics and does not condone military intervention in political processes.”
Military vehicles were stationed around key government buildings in Harare on Wednesday after officers announced an operation to purge Mugabe’s entourage of “criminals.”
They insisted that they had not seized power, but President Jacob Zuma of neighbouring South Africa said Mugabe had told him he was confined to his home.